Qalabka - Qalabka Qalabka | Wararka Gadget (Bogga 2)
Soundcore Liberty 3 Pro waa beddel cusub oo leh ANC iyo qeexid sare
Waxaan si qoto dheer u eegeynaa Liberty 3 Pro ee cusub ee Soundcore, taleefoonnada dhagaha ee TWS ee leh ANC iyo maqal Hi-Res oo ka farxin doona isticmaaleyaasha.
Waxaan awoodnay inaan tijaabino afar alaab oo Ugreen ah oo yimaada si ay u dhammaystiraan aaladaha elektiroonigga ah ee aan sida ugu badan u isticmaalno maalin kasta.
ANNKE NC400 ayaa laga yaabaa inay tahay kamaradda ilaalada ee aad u baahan tahay. Tiknoolajiyadda goynta ee gurigaaga ama meheraddaada qiimo jaban.
Waxaan tijaabinay EZVIZ ELIFE, kaameradda oo aan lahayn fiilooyin iyo madaxbannaani fara badan oo leh aragti habeen midab leh iyo nidaamka ogaanshaha dhaqdhaqaaqa horumarsan
Amazon waxay cusboonaysiisaa xakameynta codka Alexa oo waan tijaabinay
Meesha cusub ee Amazon Voice Voice Remote (Qarniga 3aad) ayaa la sii daayay iyada oo leh isbeddelo naqshad yar oo aan si fiican u tijaabinnay.
Kaamirooyinka ilaalada fiidiyowga oo leh ilaalin 360 ah
Kaamirooyinka ilaalada fiidiyowga oo leh 360 ilaalin ayaa kuu oggolaanaya inaad xakameyso oo aad kormeerto xarumo badan oo dhisme ah, kala ...
Roborock's Onyx Dump Station ayaa sahlaysa [Dib u eegista]
Roborock waxay soo bandhigtay istish-haad cusub oo isdabamarin ah waxaanan si qoto dheer ugu lafogurnay si aad u fiirsato.
Waxaan falanqeyneynaa Huawei WiFi AX3, beddelka saxda ah ee router-wadeyaashaada ee leh WiFi 6 iyo waxqabadka cajiibka ah.
Waxaan si qoto dheer u eegaynaa Realme Watch 2, oo ah nooca ugu raqiisan ee daawashada Realme si ay u soo jiito isticmaaleyaasheeda marka ugu horeysa ee la xiran karo.
Realme TechLife Robot Vacuum waa furitaankii ugu dambeeyay ee astaanta, nadiifiye robot nadiifiya oo ka yaabiya waxqabadkeeda / saamigeeda
HUAWEI Watch 3, oo leh HarmonyOS waa smartwatch tixraaca
Nala soo baar Huawei Watch 3 cusub oo ka socda shirkadda Aasiya, qalab leh HarmonyOS ayaa na siinaya khibrad dhameystiran.
Bandhigga cusub ee Amazon Echo Show 5 (2021) waa kan, qalab leh kamarad hagaagsan, howlo cusub iyo horumarin yar oo xagga tayada codka ah.
Waxaan si qoto dheer u eegeynaa websaydhka 'Yalink's UVC20 webcam', oo ah wehelka ugu fiican kulammadaada Kooxaha Microsoft iyo waxyaabo kaloo badan.
Kobo wuxuu soo bandhigayaa Elipsa cusub, oo ah akhriste e-akhris aad u dhammaystiran
Kobo Elipsa cusub ayaa lagu iibin doonaa wax ka yar 400 oo euro oo leh shaashad taabasho ah iyo qalabyo ay ka mid yihiin qalin iyo kiis caqli badan.
Ku kalsoon GXT 323W Carus - Qalabka dhegaha ee jaban ee PS5
Waxaan kuu soo qaadaneynaa beddelaad qaali ah oo leh waxqabad wanaagsan, GXT 323W Carus sameecadaha dhegaha ee Trust oo si buuxda ula jaan qaada PS5.
Badbaadinta gurigaaga, ganacsigaaga ama xafiiskaaga waa muhiim. Tan awgeed waxaa jira nidaamyo qaylodhaan oo ay la socdaan ...
Waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee Jabra, sameecadaha dhagaha ee 'Elite 75t,' waxaan ku ogaaneynaa falanqeynteena qoto dheer fiidiyow iyo sanduuqyo faahfaahsan
Waxaan tijaabinay Tineco iFloor 3 iyo A11 Master + nadiifiyeyaal, faaruqin iyo xoqid la'aan fiilooyin.
Waxaan ku tijaabinay Tineco iFloor 3 vacuum mop iyo Tineco A11 Master + oo leh ismaamul heer sare ah iyo dhamaan noocyada qalabka.
Aukey laambad la qaadan karo oo salka ku goglan (DIB U EEGID]
Waxaan tijaabinay Laydhka cusub ee 'Aukey Brand Table Lamp', nal badan oo midab leh oo laambad sariirta la qaadan karo
Waxaan tijaabinay Aukey's USB-C Hub, oo ah 8-dekedo dhan-in-mid ah oo ku habboon MacBook M1 cusub [DIB U EEGID]
Miyaad deked ka maqantahay laptop-kaaga? Soo hel Aukey USB-C Hub cusub, oo ah 8 kiiba 1 si aad uxalliso la'aanta dekedo.
Waxaan tijaabinay qalabka Hama Influencer
Hama waxay soo saartay badeecooyin taxane ah oo loo qaabeeyey si aad uga samayso waxyaabahaaga ugu fiican barta Instagram, YouTube ama meeshii aad rabto.
Da'da dhijitaalka waa xaqiiqo, wanaag iyo xumaanba. Qodobkaan waxaan ku arki doonnaa goobaha ugu wanaagsan ee lagu soo dejisan karo joornaalada bilaashka ah.
Muxuu Epublibre ushaqeyn la'yahay? Bal eeg kuwan kale
Way sii kordheysaa caadi ahaan in la helo boggan hoos ama adeeg la'aan, waxaan la macaamili doonnaa arrintan oo waxaan dib u eegi doonnaa waxyaabo kale oo beddelaad ah.
Xagaagu waa imanayaa oo weheliyaa Dhibaatadu waxay tahay markii aan joogno xilligan oo aan uruurineyno dhammaan ...
Haddii aad raadineysid headphones-ka buuqa-baajinta dhawaaqa, waxay u badan tahay in Apollo Bold oo ka socda shirkadda Tronsmart uu ku xiiseyn doono.
Waxaan falanqeyneynaa Amazon Fire HD 8 2020 cusub
Waxaan gacanta ku haynaa Amzon Fire 8 HD cusub laga bilaabo 2020, oo ah raqiis, kiniin cusbooneysiin badan oo lagu bixiyo lacag yar.
Waxaan falanqeyneynaa qalabka cusub ee loo yaqaan 'Yeedi 2 Hybrid robot vacuum' waxaanan kuu sheegeynaa waxa khibradeennu ku soo qaadatay qalabkan dhameystiran.
SHARAF SmartLife: Wax kasta oo lagu soo bandhigo Sharafta si loo cusbooneysiiyo buugeeda
Maamuusta ayaa mar kale soo bandhigtay si ay u cusbooneysiiso buugeeda, markan waxay dhaafsiisan tahay taleefannada casriga ah ama la gashado. Faahfaahinta oo dhan.
Soo saaraha Aasiya ee Honor wuxuu soo bandhigay alaabooyin cusub oo sumcad u leh dalkeena. Waa kuwan qiimayaashooda iyo sifooyinkooda.
Dib u eegida Kaamirada Guriga Yi 1080p
Yi 1080p Home Camera, qalab ku habboon ilaalinta fiidiyowga, oo leh isku xirka Wi-Fi, App aan caadi ahayn iyo dhawaaq laba-geesood ah
Isticmaalka eReaders ayaa kordhay 140% toddobaadyadii la soo dhaafay
Isticmaalka buugaagta iyo buugaagta maqalka ah toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa qarxay, sida lagu sheegay xog ay Kobo siisay Fnac
Haddii aan leenahay Tablet ama Smartphone, waxaan ka faa'iideysan karnaa meelaha qadka ah si aan u soo degsano kumanaan cinwaanno bilaash ah. Halkan waxaan ku tusaynaa.
Wax yar ka hor bil ka hor, Huawei wuxuu ku dhawaaqay in bisha Maarso 26 ay si rasmi ah ugu soo bandhigi doonto Yurub, noocyada cusub ...
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa dabool si loo xoojiyo timaha
Maanta waxaan soo bandhigeynaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee Xiaomi xilligan, dabool ballan qaadaya inuu joojiyo timo luminta iyo xoojinta xididka.
Talooyinka teknoolojiyadda ee la bixinayo Maalinta Jacaylka
Talooyin ku saabsan in lamaanahayaga la siiyo maalinta Jacaylka iyada oo la adeegsanayo aaladaha ugu xiisaha badan uguna faa'iidada badan suuqa.
Kani waa Qanciyaha labka ah
Ragga qanacsanaanta gariirka, toy toy lab waa iib iyo ballanqaaday waayo-aragnimo gaar ah oo wanaagsan.
Daboolka loogu talagalay AirPods ee ku yaal bogga Apple
Apple wuxuu ku darayaa dhowr kiis oo kujira buugiisa alaabooyinka loogu talagalay AirPods Pro, jiilka ugu dambeeya ee sameecadaha wireless
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno Hohem gimbal, qalabka moodada loogu talagalay kuwa doonaya inay ku boodaan tayada fiidiyowyada lagu sameeyay taleefannada casriga ah
Siinta smartwatch waa ikhtiyaar aad u fiican inaad ka fiirsato Kirismaskan haddii aadan weli garanayn waxa la iibsado.
Hoos waxaan ku tusi karnaa shan jijimooyin caqli badan oo wanaagsan oo aan hadda ka iibsan karno suuqa.
10% qiimo dhimis ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo agabka loogu talagalay Jimcaha Madow
SwellPro waxay u dabaaldegtaa Jimcaha Madoow iyadoo na siineysa qiimo dhimis 10% ah dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo agabyada ku jira dukaankeeda internetka. Halkan ka hel qiimo dhimistaada.
Maamuusku wuxuu soo bandhigayaa Magic Watch 2
Maamuusku wuxuu soo saaray nooca cusub ee casriga ah. Waxaan ogaanay Sharafta Watch Sixirka 2 ee imanaya ...
Soo ogow falanqeyntan dhameystiran ee Huawei Watch GT 2, smartwatch cusub oo ah nooca Shiinaha oo horeyba si rasmi ah loogu bilaabay iibinta Spain.
CAYAAR-Q2: Gimbal jeebka ku jira oo Zhiyun ah
Soo ogow wax walba oo ku saabsan SMOOTH-Q2, Zimyun gimbal oo u taagan cabirkiisa yar iyo sahlanaanta adeegsiga, kuna habboon taleefankaaga casriga ah.
Soo ogow noocyada cusub ee fiilooyinka AUKEY ee leh tiknoolajiyada Dynamic Detect si aad ugu isticmaasho kharashka degdegga ah mobiilkaaga ama laptop-kaaga.
Parkingdoor: Ku fur albaabka garaashkaaga taleefankaaga (30% nambarka dhimista)
Marabtaa inaad garaashka ku furto mobilkaaga? Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Parkingdoor, nidaamka kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho casrigaaga furaha. 30% nambarka dhimista
Huawei FreeBuds 3: sameecadaha dhagaha ee cusub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Huawei FreeBuds 3 cusub oo si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019.
Sonos Dhaqaaq: Sonos ku hadla kii ugu horreeyay ee bannaanka ku shaqeeya
Sonos Dhaqaaq: Sonos ku hadla kii ugu horreeyay ee bannaanka ku shaqeeya. Raadi wax walba oo ku saabsan afhayeenka Sonos ee si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019.
Kobo Libra H2O, aaladda cusub ee qoyska Kobo oo leh shaashad biyo-diid ah oo 7-inji ah oo sidoo kale badbaadineysa badhamada jirka.
Farshaxanka Logitech, kumbuyuutarka ugu fiican ee lagu shaqeeyo? Waan hubinaynaa
Logitech Craft, kumbuyuutar dial ah oo leh wax kasta oo ay u qaadato inuu noqdo kiiboodhka ugu fiican shaqada.
SPC Visum, waxaan falanqeyneynaa fiidiyowgan casriga ah
Waxaan falanqeyneynaa Visum-ka 'SPC Visum', oo ah muuqaal fiidiyoow caqli badan oo loogu talagalay si aad u dhammaystirto otomaatiga guriga ee gurigaaga ugu badnaan, nala soo baro.
SCUF Prestige waa kantaroolaha cusub ee ciyaaraha 'Scuf Gaming' ee Xbox One
Soo saaraha 'Scuf Gaming' wuxuu soo bandhigay balanqaadkiisa cusub ee kantaroolida ganing isagoo soo bandhigaya 'Prefige'
Eureka, aalad xiise leh oo aanad waayi doonin furayaashaada, ama wax la mid ah
Waxaan gacanta ku haynaa Eureka, oo ah aaladda loo yaqaan 'Cellularline gadget' oo aad isla markaaba ku heli karto wax kasta oo kaa lumay mobilkaaga.
Haddii aadan weli garanayn nooca Naqshadda aad u baahan tahay, qodobkan waxaan ku tusinaynaa kuwa ugu fiican ee ku saleysan baahidaada
Bandhigga Amazon Echo, falanqaynta: Hadalka weyn iyo shaashad weyn oo leh Alexa
Waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqaynta Amazon Echo Show, shaashadda weyn ee Amazon ee u timid inay bixiso dhawaq aad u fiican iyo Alexa qiimo ku jira.
Kani waa Galaxy Fit, jijin cusub oo firfircoon oo Samsung ah
Soo ogow wax kasta oo Samsung Galaxy Fit cusub ah, oo ah kan cusub ee xidhan ee Samsung Galaxy, oo awood u leh inuu ku bixiyo labadiisa nooc
Qi moshi Porto Q 5k wireless dib u eegis batari la qaadan karo
Falanqaynta mootada Xiaomi M365. Soo ogow astaamaheeda, faa iidooyinkiisa, qasaarooyinkiisa iyo halka aad uga iibsaneyso qiimo jaban Mudan?
Markii qabowgu yimaado, moodooyinka cusub ee galoofyada ee ka socda shirkadda Mujjo ayaa soo muuqda
Markii qabowgu yimaado, moodooyinka cusub ee galoofyada ee ka socda shirkadda Mujjo ayaa umuuqda inay adeegsanayaan aaladaha taabashada annaga oo aan qabow ahayn
Falanqaynta ThiEYE Dr.X RC, oo ah diyaarad Drone ah oo duubeysa 1080P oo ah € 70
Soo hel ThiEYE Dr.X RC, oo ah minidrone kaliya € 70 noo siisa duulimaad qof-koowaad ah iyo tayo fiican oo sawiro iyo fiidiyowyo ah. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Sonos wuxuu bilaabayaa dhammaan noocyada ku hadla qiimaha sare ee Japan
Maanta waxa loo arkaa daahfurka dhammaan noocyada kala duwan ee Sonos ee loogu talagalay dadka jecel muusikada Japan, oo ah suuqa labaad ee ugu weyn adduunka ee muusikada.
Kani waa xeedho cusub oo bilaa xadhig ah oo loo yaqaan 'Tesla wireless' oo loogu talagalay taleefannada casriga ah
Shirkadda Tesla, oo Elon Musk ay tahay tan ugu habboon, mararka qaarkoodna shakhsiyaadka muranka badan, ayaa u go'ay ...
Gambaleellada fiidiyooga ee fiidiyowga ah iyo kaamirooyinka amniga ayaa hadda si rasmi ah looga heli karaa Spain
Dhamaan kuwa aan aqoon, Ring, waa shirkad inta badan u heellan ilaalinta guriga ...
Kani waa nalalka cusub ee 'LED LED', mid ka mid ah oo leh fiilo la'aan
Runtii inbadan oo idinka mid ah ayaa guriga ku haysta xeedho taas oo kuu ogolaaneysa inaad kawada qaadatid aaladahaaga elektarooniga ah hal hal Shirkada soo saarta qalabka mobilada, Trust, ayaa hada soo bandhigtay labo laambadood oo cusub, oo loogu talagay tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay.
AirSnap, waa kiiska cusub ee laba iyo toban South AirPods ah
Qalabka iyo daboolka loogu talagalay AirPods waxaa ku yaal dhowr suuqa, tanina waa mid kale oo wax ku kordhinaysa ...
Xaraashka xamuulka ah ee "Raqiiska ah" ee cusub Samsung Galaxy Note 9
Taasina waa Roland Quandt, ayaa mas'uul ka ah sifeynta sawirka waxa uu noqon lahaa xeedho labaad oo wireless ah ...
Wireless Charger Duo, waxay noqon laheyd laqeeyaha Qi Qiil ee loogu talagalay Xusuusin 9 iyo Galaxy Watch
Soo bandhigida Samsung Galaxy Note 9 cusub ayaa ah mid aad u dhow oo xariirkii ugu dambeeyay ee ku saabsan bandhiggan uusan ...
HyperX Pulsefire Surge game mouse hadda waa la heli karaa
Jiilka labaad ee jiirka HyperX, Pulsefire Surge, ayaa hadda laga heli karaa suuqa 69,99 euro.
Cellularline waxay ku sharraxeysaa lacag-bixinta wireless-ka waxayna daboolaysaa inta u dhexeysa iPhone X
Cellularline waa sumad si tartiib tartiib ah u dhex galaysa suuqa qaranka, markaa waxaan falanqeynaynaa seddex ka mid ah beddelkeeda ee ilaalinta iyo ku dallacaya iPhone X.
Acer Predator wuxuu soo bandhigayaa X27: 4K, HDR iyo G-Sync kaliya $ 1.999
Qalab kasta, oo dhexdhexaad dhexdhexaad ah, oo aan raadineyno inaan ku raaxeysan karno waxyaabaha aan ugu jecel nahay kombuyuutarka ma leh qiime la mid ah ...
Warqad Dijital ah, buuga elektaroonigga ah ee cusub ee Sony
Waa buug 1o, 3-inji ah oo khad khad elektaroonig ah kaas oo aan ku aqrin karno qoraalada, ku abuuri karno ...
NIU waxay soo bandhigaysaa eScooter koronto oo casri ah, N1
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa soo bandhigida mooto koronto iyo caqli badan, NIU N1. Mootadan ...
Xiaomi waxay u soo bandhigeysaa turjumaan Sirdoonka Artifishalka oo u turjumaya 14 luqadood
Xiaomi waa shirkadda kun qalab. Wuxuu soo bandhigay tarjumaan leh Cilmiga Sirdoonka Artifishal iyo qiimo qaali ah. Magaceedu waa Xiaomi Konjac AI
Samsung PRO Endurance, kaararka SD ee waxqabadka sare leh
Samsung waxay soo bandhigtay kaararka xusuusta cusub oo qaab SD ah loogu talagalay codsiyada duubista fiidiyowga ee degdegga ah. Iyagu waa Samsung PRO Endurance cusub
devolo Multiroom WiFi Kit 500+, ka hel caymis internet oo fiican guriga oo dhan
Waxaad ku leedahay ciyaar PLC cusub suuqa. Waa noocyada loo yaqaan 'devolo Multiroom WiFi Kit 550+'. Ciyaartan PLC waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxeysato xiriir wanaagsan qol kasta oo guriga ka mid ah
Meizu Halo, sameecadaha dhagaha ee Bluetooth oo leh fiilo iftiin leh si ay u noqdaan dareenka habeenkii
Meizu Halo waa sameecadihii ugu dambeeyay ee Bluetooth ee shirkadda Shiinaha laga helo. Intaa waxaa dheer, waxay u taagan yihiin inay bixiyaan fiilo iftiin leh oo lagu arko habeenkii haddii aad isboorti sameyso
Amazon waxay u dabaaldegtaa maalinta buugga iyadoo 30 Euro laga dhimay Kindle Pawerwhite iyo qiimo dhimis dhan 65%
Si loogu dabaaldego maalinta buugga, Amazon waxay na siisaa Kindle Paperwhite kaliya 99 euro, oo leh 30 euro oo ka baxsan qiimaha caadiga ah.
Razor X waa sabuurad koronto oo leh qiime macquul ah iyo waxqabad wanaagsan
Dunida korontadu waxay u kacaysaa sida xumbo oo kale markaan eegno hareerahayaga waxaan arki karnaa nooc walba ...
EBay Super Weekend wuxuu kula soo laabtay heshiisyo farsamo oo waa weyn
EBay Super Weekend wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka iyadoo qiimo dhimis lagu sameeyay ilaa 60% qalabka elektarooniga ah ee noocyada oo dhan
Boosted wuxuu bilaabayaa laba shaashad oo koronto dhab ah oo cusub
Aasaasaha Kobcinta John Ulmen, ayaa xabadka ka saaraya sabuuradda korontada ee cusub ee qoyska mana ahan ...
GXT 590 Bosi Bluetooth waa aaladda maamusha cusub ee Trust ee Android iyo Windows
Shirkadda soo saarta Trust ayaa soo bandhigtay GXT 590 Bosi Bluetooth-ka cusub, oo ah aaladda laga hago qalab kasta oo ay maamulaan Android iyo Windows.
HomePod wuxuu ku guuleystay calaamado heer sare ah oo ku saabsan tayada codka, laakiin tan ugu fiican weli ma imaaneyso haddii Apple dhab ahaantii dhab ka tahay.
Mophie wuxuu bilaabay saldhig cusub oo 10W wireless ah
Mophie wuxuu bilaabayaa saldhig cusub oo lacag la aan ah oo loogu talagalay in loogu isticmaalo casriga casriga ah. Kani waa Mophie Charge Stream Pad +
Google waxay kudareysaa sifooyin cusub si ay ugu raaxeystaan ​​buugaagtaada maqalka
Horraantii 2018 Google waxay ku dartay buugaag maqal ah buuggeeda elektaroonigga ah. Iyo laba bilood ka dib waxay ku dareysaa shaqooyin cusub oo xiiso leh qaabkan
Sharkoon Rush ER2, waxaan ku tijaabinay sharad dhaqaale dhagaha dhagaha leh
Gelitaanka meesha aan ka heli doonno fursad aan kaga hadalno wax kasta oo koofiyadaha tayada leh ee Sharkoon Rush ER2 ay bixin karaan.
Sony waxay yareyneysaa qiimaha muraayadaha indhaha dhabta ah ee PlayStation VR 100 euro
Sony waxay hadda shaacisay inay hoos u dhacday qiimaha PlayStation VR, iyadoo qiimaheeda cusub uu yahay $ 299, qiimo dhimis ah 25%.
Sharkoon Shark Zone H40, waxaan tijaabinay dhagaha dhagaha ee ciyaarta
Gelitaanka halkaas oo aan si qoto dheer ugu falanqeyn doonno wax walba oo headset-ka ciyaaraha ah sida soo jiidashada Sharkoon Shark Zone H40 ay bixin karto.
Diyaaradan ayaa kuu oggolaan doonta inaad lacag ka qaadatid gaarigaaga korontada ku shaqeeya haddii uu kaa dhammaado batteriga
Dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii aan ka dhammaano batteriga baabuurkeenna korontada waxay yeelan karaan maalmo lagu tirin karo diyaaraddan inay ku dallacdo gawaarida korantada
ASUS waxay soo bandhigeysaa ROG Gladius II Origin, oo loogu talagalay cayaaraha
Shirkadda Taiwanese ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay jiilka saddexaad ee ROG Gladius, oo ah jiir leh beddelayaal la isku beddeli karo, qaraar dhan 12.000 DPI, aragti iyo xawaare la socosho ah 250 DPI
SSD-ka ugu weyn adduunka wuxuu noo ogolaanayaa inaan keydinno 100 TB
Shirkadda Nimbus, ayaa hadda soo bandhigtay SSD-kii ugu horreeyay oo qaadi kara ilaa 100 TB oo keyd ah
Waxaan tijaabinay DA144 dodocools. Qiime la hagaajiyay iyo faahfaahinta sameecadaha wanaagsan
Waxaan horey u aragnay qalab kale oo ka mid ah shirkadda 'dodocool firm' kiiskan waxaan ku soo qaadaneynaa dhegaha dhagaha ee isboortiga, biyuhu, Microphone ...
Toshiba wuxuu sii wadaa inuu sharad ku sameeyo qaybta ganacsiga. Hal-abuurkiisii ​​ugu dambeeyayna waxaa loogu magac daray Toshiba dynaEdge, oo ka kooban Windows 10 kumbuyuutar jeebka ku shaqeeya iyo muraayadaha casriga ah.
Thanks to 19.500 mAh baytariga dibada ee mophie, waxaan ka qaadi karnaa laptop-ka, ama xitaa MacBook si dhakhso leh, si fudud oo aan lahayn bareesooyin.
ICON, oo ah shirkadda daabacaadda 3D iyo New Story, ayaa guryo u dhisi doona El Salvador
Tikniyoolajiyadda daabacaadda ee 3D ayaa ku socota jidkeeda inkasta oo xaqiiqda ah in maalmahan aysan jirin mashaariic aad u tiro badan ...
Wanle wuxuu bilaabayaa kiis u badalaya iPhone-kaaga dhabta ah Game Boy
U beddelo iPhone-kaaga Ciyaar Wiil leh kiiska Wanle. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan kiiskan asalka ah ee ka caawinaya u beddelka taleefankaaga Game Game dhab ah oo si caadi ah u shaqeeya.
Bose AR, oo ah barnaamijka dhabta ah ee la kordhiyay ee shirkadda codka
Xaqiiqda sii kordhaysa ama xaqiiqda dhabta ah ayaa maanta taagan bartaas oo calaamadeyn doonta ...
Ku hadlayaasha Echo ee Amazon waxay bilaabaan inay ku qoslaan naftooda sabab la'aan
Qalabyada uu maamulo kaaliyaha Amazon, oo ay ku jiraan kuwa ku hadla caqliga, ayaa bilaabay qosol la'aan sabab muuqata, qosol aad u dhib badan.
Thrustmaster wuxuu ku darayaa laba nooc oo xadidan oo xadidan oo loo yaqaan 'Far Cry 5 headphones'
Si loogu dabbaaldego daah-furka ciyaarta cusub ee Far Cry 5, Trustmaster wuxuu ku darayaa laba headets cusub oo ciyaaraha ah Y-350CPX iyo Y-300CPX….
Xakamaynta qalabka Samsung ee codkaaga waxay suurtogal ku noqon doontaa waqti aan dheerayn
Samsung ayaa iibin doonta qalabkii ugu horreeyay ee Bixby-ka ah ee iibka ah sanadka ugu horreeya, sidaa darteed Internetka Waxyaabaha waa wax ka badan sheeko fudud sida ay tahay illaa hadda.
Qalabka ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Jacaylka
Haddii aynaan wali garanayn waxa aan u iibinno lamaanaheenna Maalinta Jacaylka, markaa waxaan ku tusaynaa aaladaha elektaroonigga ah ee ugu wanaagsan ee maalintan kula dabaal degga lamaanaheenna.
Waxaan tijaabinay iftiinka dhaqdhaqaaqa Aukey LT-SL1 nalka banaanka LED-ka
Waana taa maanta inaan haysanno xalal badan oo lagu iftiimiyo jardiinooyinka, geedaha geedaha, albaabbada guryaha ama ...
Booliska Shiinaha ayaa isticmaala muraayadaha aqoonsiga wajiga si ay u baaraan dadka laga shakiyo
Booliska Shiinaha, sida ay ugu haminayaan inay marwalba muwaadiniintooda xakameeyaan, waxay bilaabeen inay hirgeliyaan nidaamka aqoonsiga wajiga ee muraayadaha saraakiisha booliska
Mar labaad waxaan ku tusinaynaa waxa ugu wanaagsan ee Amazon ay bixiso maanta, halkaas oo aan ka heli karno kormeerayaasha qalooca ilaa taleefannada casriga ah.
Sidan ayuu u gashaa ololiyaha Elon Musk doonayo inuu iibiyo
Mashruucan cusub ee Elon Musk ee ka socda Shirkadda The Boring Company ayaa ah dab ololeeye qiimihiisu yahay $ 600 wuxuuna suuqa ku soo galayaa $ 600
Kuwa ugu xiisaha badan Amazon waxay bixisaa maanta (25-01-2018)
Hoos waxaan ku tuseynaa dalabyada ugu muhiimsan ee Amazon ay na siiso maalintii oo dhan.
DJI waxay soo bandhigeysaa diyaaradeeda cusub, Mavic Air
Waana inaan maalmo kooban helnay warar ku saabsan suurtagalnimada in shirkaddu soo bandhigi doonto diyaarad cusub oo aan duuliyaha lahayn ...
Kuwa ugu xiisaha badan Amazon waxay bixisaa maanta (23-01-2018)
Hoos waxaan ku tuseynaa dalabyada ugu wanaagsan ee Amazon ee maanta, Janaayo 23, 2018, waxay bixisaa xaddidan waqtiga iyo cutubyada.
Yaraynta miisaanka joornaalada United Airlines waxay keydisay in ka badan 600.000 litir oo shidaal ah
Shirkadda duulimaadka ayaa sheegtay inay ku guuleysatay inay yareyso in ka badan 600.000 litir oo shidaal ah sanadkii, iyadoo yareyneysa culeyska majaladda ay ku siiso diyaaradda dhammaan duulimaadyadeeda.
Laydhka miiska oo leh shidma taabasho iyo isku darka midabka 256, Aukey LT-T6
Marka aan u baahanahay laambad miiska jiifka, miiska ama xitaa abuurista jawi ku habboon qolka fadhiga ...
Kuwa ugu xiisaha badan Amazon waxay bixisaa maanta (18-01-2018)
Maqaalkani wuxuu ku tusayaa kuwaas oo ah kuwa ugu xiisaha badan Amazon ee bixiya maanta, Janaayo 18, 2018, qaar ka mid ah dalabyo aad si dhib yar u awoodi doontid inaad diido haddaad sugeysay iyaga.
Kuwani waa kuwa ugu xiisaha badan ee Amazon ay bixiso maanta (16-01-2018)
Bixinta ugu xiisaha badan ee maanta Janaayo 16, 2018 ee Amazon, waxaad ka heli doontaa iyaga maqaalkan.
Shirkadda Qualcomm waxay soo bandhigaysaa processor cusub oo sameecadaha sameecadaha sameeya kuwaas oo yareeya isticmaalka kala badh in ka badan
Shirkadda Qualcomm ee Mareykanku waxay ku soo bandhigtay CES processor cusub oo sameecadaha sameecadaha sameeya oo bixiya ismaamul laba jibbaar ah kii ka horreeyay.
Kodak wuxuu bilaabayaa macdan qodis u gaar ah oo leh khilaaf
Kodak wuxuu bilaabayaa macdan qodista Bitcoins. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee ah soo saarista badeecadan oo soo saareysa faallooyin badan.
Eyga caanka ah ee loo yaqaan 'AIbo robot ey' ee loo yaqaan 'Sony' ee loo yaqaan 'robot AIbo robot' ayaa umuuqda mid kafiican oo sameeya tabo badan
Sony waxay sii waday inay horumariso eygeeda aaladda ee ah Aibo haddana waa ka caqli iyo xiiso badan tahay nooca ...
Ugu Fiican CES 2018
Mid ayaa dhammeeyay carwadii ugu weyneyd ee tikniyoolajiyadda macaamiisha oo sannad lagu qabtay Las Las Vegas, waa waqtigii la soo koobi lahaa
Byton wuxuu muujinayaa baabuurkeeda korontada ee mustaqbalka (fiidiyow)
Byton waa shirkad shiineys ah oo ka soo if baxday CES 2018. Marka horena, waxay muujisay aragtideeda gaarka ah ee gaariga mustaqbalka.
HTC Vive Pro, qaraar dheeri ah oo loogu talagalay ka go'naanta HTC ee xaqiiqda dalwaddii
Daboolida nafteena qaab dhismeedka CESS 2018 maanta waa inaan ka hadalno HTC Vive Pro cusub, muraayadaha loogu talagalay xaqiiqda dhabta ah ee lagu hagaajinayo dhammaan faahfaahinta yar yar ee ay bulshada weydiisanayeen muddo dheer.
Qalabka ugu fiican ee 2017
Sannadka 2017 wuxuu na siiyay qalab aad u tiro badan, xumaan iyo samaanba, laakiin qormadan waxaan kaliya diirada ku saaraynaa soo bandhigida kuwaas oo ahaa aaladihii ugu fiicnaa ee suuqa ku dhacay sanadka 2017. Ma wada garaneysaa dhammaantood?
Ka faa'iideyso heshiisyadii ugu dambeeyay ee Lightinthebox Christmas ka hor inta aysan dhammaan
Mar labaad nimankii ka socday Lightinthebox waxay gacanta noo geliyeen dalabyo badan oo waqti ah iyo cutubyo kooban oo aadan seegi karin.
Avido WiBa, xeedho wireless 2-in-1 ah oo la jaan qaada Qi-qaadista
Taasina waa tan maanta la yimid imaatinka lacag la'aanta ah ee moodooyinka cusub ee Apple, ...
Amazon waxay iibisay in ka badan 5.000 bilyan oo alaab ah iyada oo loo marayo barnaamijka Prime ee 2017
Ragga ka socda Amazon waxay sii daayeen qaar ka mid ah tirooyinka ay shirkaddu heshay inta lagu gudajiray 2017 labadaba gudaha iyo dibedda barnaamijka PRIME
Qalabyadii ugu xumaa ee 2017
Dib u eegista 2017, maanta waxaan ku tusineynaa qalabkii ugu xumaa ee 2017, aaladaha qaar niyad jab ku riday guud ahaan bulshada
Garmin Vivofit-ka cusub 4 wuxuu na siinayaa had iyo jeer shaashadda iyo sanad batteri ah
Garmin waxay soo bandhigtay Vivofit 4, jiil cusub oo tirakoob jijin ah oo noo ogolaanaya inaan cabirno dhamaan howlaheena batarigooda soconayo 1 sano
Dhagaha dhagaha ugu fiican isboortiga sanadka
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno koofiyadaha isboortiga ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'bluetooth' ee 2017, oo ku habboon dhammaan cayaartoyda diidaya inay dibadda u baxaan muusig la'aan.
Waxaan tijaabinay Mujjo, galoofyo gacmo-gashiyo ah oo laba-laaban ah waxaanan ku darnay 10% lambar qiimo dhimis ah
Hadda oo aan ku jirno ololihii Kirismaska, maxaa ka fiican in aan yeelano fikrado aan siino ama nafteena u siino iyo xaaladdan ...
Aad iyo aad u badan ayaa ragga rida mashiinka dharka lagu dhaqo, miyay tiknoolajiyaddu gacan ka geysaneysaa qaybinta hawlaha?
Ololaha Samsung, #YaNoHayExcusas wuxuu doonayaa inuu waxbarto lammaanaha si qaybinta shaqooyinku ugu sinnaadaan ragga iyo dumarka
Nommi, router mobile 4G ah oo leh fursado badan
Nommi wuu ka badan yahay router-ka WiFi: wuxuu u shaqeyn karaa sidii fidiyaha WiFi-ka guriga ama xeedho wireless ah. Soo hel dhammaan faa'iidooyinkiisa
Xeedho Aukey oo leh wax soo saar 2 USB ah iyo Power Bank oo leh USB C iyo dekedo hillaac ah oo dhan 20.000 Mah
Taasina waxay tahay in laba aaladood oo isku mid ah isla mar ahaantaana la buuxiyo ay tahay wax ka badan sidii caadiga ahayd maanta ...
Furitaanka rasmiga rasmiga ah ee dukaanka DJI ee Spain
DJI waa shirkada hormoodka ka ah soo saarista iyo iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tikniyoolajiyadda sawir qaadista erial.
Lightinthebox wuxuu ula dabaaldegayaa Cyber ​​Isniinta heshiisyadan cajiibka ah
Ragga ka socda Lightinthebox waxay na soo bandhigaan dalabyo tiro badan oo aan ugu dabaaldegno Cyber ​​Monday, dalabyo qaas ah oo gaar ah oo aynaan seegi karin
Waxaan falanqeyneynaa xarkaha fiilada ee shirkadda Holife QC 3.0
Waxaan tijaabinay Qiimo Xireyaasha Xayeysiinta Qi Wireless 3.0 xarkaha fiilada wireless, kaas oo naga caawin doona inaan ku qaadno casriyadeena casriga qaab fudud, ...
Waa waqtigii la iibsan lahaa diyaarad aan duuliye lahayn oo Jimcaha Madoow ayaa ah fursadda ugu fiican
Maqaalkan waxaan ku soo bandhigeynaa 3 drones si loo daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee isticmaale kasta oo doonaya inuu ka bilaabo adduunkan cajiibka ah.
Ka faa'iideyso qaar ka mid ah heshiisyadan xiisaha leh ee Jimcaha Madow
Maalintii ugu dambaysay ee inbadan oo naga mid ah sugtay ayaa timid, si aan u cusbooneysiino qalab kale oo aan ku haysanno guriga, hadda ...
Kuwani waa qaar ka mid ah heshiisyadii ugu wanaagsanaa ee Amazon Black Fridady ee maanta
Qodobkaan waxaan ku tusineynaa dalabyada ugu xiisaha badan ee aan maanta oo dhan ka heli karno Amazon
Ku dalacso qalabkaaga batterigan la qaadan karo ee ka yimid Tesla
Ma jeceshahay naqshadda Tesla Superchargers? Hagaag hadda waxaad yeelan kartaa mid aad ku cabirto guriga adoo adeegsanaya batariga la qaadan karo ee Tesla
Sannad-guurada 10aad ee farxad leh, Kindle, kacaanka akhriska elektarooniga ah
Kindle wuxuu jiray 10 sano. Waxaan dib u eegeynaa taariikhdeeda, moodooyinka la heli karo, nidaamkeeda deegaanka iyo kuwaas oo ah buugaagta ugu badan taariikhda la soo dejiyey
HTV Vive Focus, muraayadaha cusub ee xaqiiqda dalwaddii laga helo HTC oo aan lahayn fiilooyin
Muraayadaha cusub ee xaqiiqda dalwaddii ee HTC loogu talo galay suuqa Shiinaha waxaa lagu magacaabaa HTC Vive Focus waxayna kalabar marayaan Google's HTC Vive iyo Daydream
Ka faa'iideyso deeqaha Gearbest ee Noofambar 11
Gearbest waxay leedahay dalabyo badan oo loo diyaariyey 11/11, oo sidoo kale loo yaqaan 'Singles Day' ee Shiinaha.
QARSOON, Telefoonada dhegaha lagu xidho ee 'cellularline' kaabsoolka dhegaha ayaa yimid
QARSOON, shaki la'aan, wuxuu ku yimid tartan wanaagsan dhammaan noocyada wireless-ka iyo dabeecadaha madax-bannaan ee dhagaha dhegaha.
Nook GlowLight 3 cusub wuxuu la yimid shaashadda khad elektaroonig ah
Waana in qoyska buugaagta elektiroonigga ah NooK ee Barnes & Noble, ay muddo dheer haysteen iyada oo aan la yaabin kuwa jecel ...
HoloLens waxay yimaadeen Spain iyagoo wata shahaadada IP50 ee ilaalinta aasaasiga ah
Shirkadda ayaa maanta shaacisay inay ballaarinayso helitaanka qalabkan illaa 29 dal oo cusub oo ku yaal Yurub, iyo inta u dhexeysa ...
Shirkadda Jeff Bezos ayaa hadda ku dhawaaqday in bilo yar gudahood, Kindle Oasis ay heli doonto cusbooneysiin ka dhigaysa mid la jaan qaadi kara Audible
Feiyu WG2, oo ah xasiliyaha kamaradaha isboortiga ee biyuhu xiraan
Feiyu WG2 waa xasilin ama gimbal loogu talagalay kamaradaha isboortiga sida GoPro iyo Xiaomi. Badeecadani waa biyo-diid
Amazon Cloud Cam + Amazon Key: isku dhafka ugu fiican
Kaamirada cusub ee Amazon, Amazon Cloud Cam, waxay na siineysaa qaraar buuxa oo HD ah oo leh duubista daruuriga iyo qalabka dareemayaasha oo ah qiime aan caadi aheyn.
Waxay tijaabinayaan kalsoonida shabakadaha fiber optic si loo ogaado dhulgariirka
Waad ku mahadsan tahay dareemayaasha ay hindisay Jaamacadda Stanford, waxaa suurtagal ah in lagu lamaaneeyo fiber optics si loo ogaado dhaqdhaqaaq kasta oo dhulka ah
Samsung 360 Round, ballanqaadka ah fiidiyowyada 360 ee xirfadlayaasha
In kasta oo aan hadda la heli karin, shirkadda Korea waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Samsung 360 Round, oo ah aalad leh 17 kaamiro oo lagu duubayo 360 digrii
Romeo Power waxay bilawday 'Saber' baytar banaanka ka socda oo wax walba qaban kara
Romeo Power Saber waa batari banaanka kuu ogolaanaya inaad ka qaadatid dhamaan noocyada qalabka elektarooniga hal jeer wax kabadan. Liiska waxaa ku jira xitaa laptops
Bolt B80, waa SSD qurxoon, quusin kara banaanka
Bolt B80 oo ka socda Silicon Power waa qalab dibadda lagu kaydiyo oo SSD ah oo wata shahaadada IP68 ee biyaha iyo u caabbinta boodhka iyo naqshad qurux badan oo iswaafaqsan
Waxaan tijaabinay Kogeek kormeeraha cadaadiska dhiigga ee la jaan qaada Android iyo iOS
Arimaha caafimaadka waxaan ka helnaa aalad mug leh oo aalado casri ah oo la jaan qaadi kara casriga casriga ah. Aad ayey u soo badaneysaa ...
Amazon waxay soo saareysaa 'dongle' si ay u awoodaan inay u rartaan oo u dhageystaan ​​muusikada isla iPhoneka isla waqtigaas
Amazon waxay soo saareysaa qalab loogu talagalay oo aad ka qaadi karto iPhone-kaaga isla markaana aad awoodi karto inaad ku dalacdo. Waa qalab cusub oo lagu xiro dekedda hillaaca
Sony waxay soo bandhigeysaa jiilka labaad ee PlayStation VR
Maalmo yar gudahood, jiilka labaad ee Sony PlayStation VR ayaa imaan doona Japan, muraayadaha qaadan doona dhowr toddobaad in laga helo adduunka oo dhan
Belkin wuxuu bilaabayaa 3,5mm + adabtarada kuleylka ee iPhone
Shirkada Belkin waxay soosaartaa adabtarada danab labalaab ah iyo 3,5 mm jack oo loogu talagalay iPhone-ka loo yaqaan RockStar iyo qiime aan xiiso lahayn
Haddii aad ka fekereyso inaad iibsato baaskiil koronto ku shaqeeya, qodobkan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay, oo ay la socdaan moodooyinka ugu fiican.
Baqbaqaaqda Mambo waa diyaarad aan duuliye lahayn oo ku habboon bilowga iyadoo ay ugu wacan tahay fudeydkeeda maaraynta. Fuustada iyo clamps-ka ee ku jira sanduuqa ayaa ka dhigaya wax badan oo xiiso leh.
Kuwani waa maaliyadaha cusub ee Nike ee leh NFC chip
Shirkadda Nike waxay soo bandhigtay shaati ay ku jirto nashqad NFC ah oo naga siin doonta helitaanka macluumaadka kooxdeena si dhakhso leh oo dhakhso leh.
GePro Hero cusub ee 6 wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku duubno fiidiyowyo 4k ah 60 fps
Qaabka xiga ee GoPro, Hero 6, wuxuu noo oggolaan doonaa inaan duubno fiidiyowyo 4k tayo leh oo 60 fps ah, oo ah kamaradda isboorti ee ugu horreysa ee u oggolaanaysa
Jaybird wuxuu soo bandhigayaa Orod, Dhagaha Madaxa-banaan ee wireless-ka ah
Jaybird, oo ah shirkadda ay leedahay shirkadda Logitech waxay soo saartaa sameecado sameecado oo heer sare ah, waxay noo keeneysaa Run, sameecaddooda dhegaha la '.
AirPower, salka laga qaado iPhone, Airpods iyo Apple Watch si bilaa xadhig ah
AirPower waa saldhiga cusub ee lacag bixinta Apple kaas oo awood u siin doona kombiyuutaradaada si bilaa xadhig ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad dhigi kartaa ilaa 3 kooxood oo aad rartaan
John Deere wuxuu iibsaday bilowga AI si uu uga caawiyo cagafyadeeda beeraha
Ruug cadaa halyeey ah John Dere ayaa hada uun ku dhawaaqay iibsiga shirkad sirdoon macmal ah si ay uga caawiso beeralayda inay si dhakhso leh u qiimeeyaan dalagyadooda.
Dib u eegis ku saabsan aaladaha u dhashay inay fashilmaan
Kuwani waa qalabka ugu xun. Way isku dayeen oo way ku fashilmeen. IPAD PRO ama Samsung Galaxy Note 7 waa qaar, miyaad taqaan inta kale? Maxay u fashilmeen?
Jiirka 'Razer Basilisk' waxaad ku raaxeysan doontaa FPS sida doqon oo kale mahadnaqa kicinta
Shirkadda Razer waxay soo bandhigtay Basilisk, oo ah jiir isku dhafan kicinta oo noo oggolaan doonta inaan si buuxda ugu raaxeysanno FPS
Talaagadan Panasonic-ka ah ayaa ah tan ugu xun nolosha aan fadhiyin
Nooca qaboojiyaha casriga ah ee Panasonic uu ku soo bandhigay IFA waa fikrad aad u fiican laakiin aan loogu talagalin hab-nololeedka deggan.
Ma rabtaa inaad lacag ka qaadatid oo aad ku kaydiso iPhone-kaaga isla waqtigaas isla markaana aanad samayn waxyaabo yaab leh? Saldhigga SanDisk iXpand ayaa ah xalkaaga
Acer wuxuu soo bandhigayaa laba mashruuc oo loogu talagalay guriga iyo isticmaalka xirfadeed
Shirkadda Taiwan ee Acer ayaa soo bandhigtay laba mashruuc oo cusub oo loogu talagalay guryaha iyo bey'adda xirfadeed, oo leh astaamo isku mid ah
Dhowr daqiiqo ka hor, Samsung waxay si rasmi ah ugu soo bandhigtay Sport-ka cusub ee 'Gear Sport' IFA 2017, oo ah mid smartw